Faransiiska oo ku gacan sayray xayiraad dhanka hubka ah oo Sacuudiga lagusoo rogo – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Sabti, October, 27, 2018(HNN) Madaxweynaha Faransiiska , Emmanuel Macron, ayaa ganafka ku dhuftay baaqyada ku aaddan in xayiraad lagusoo rogo hubka Midowga Yurub ee Sacuudiga laga iibiyo wuxuuna ku tilmaamay in ay baaqyadaasi yihiin kuwo “laab lakac ah”
Arrintii Khashoggi ayaa saamayn taban ku yeelatay xiriirka Yurub iyo Sacuudiga – gaar ahaan marka laga hadlayo arrinta dhoofinta hubka.
Wasiirka arrimaha dibadda Austria, Karin Kneissl – oo dalkeedu uu hayo madaxtinimada meertada ah ee Midowga Yurub, ayaa dhabarka ka riixaysa xayiraad ay Sacuudiga kusoo rogaan dhammaan dalalka xubnaha ka ah Midowga Yurub.
Britain ayaa mawqif lamid ah kan Faransiiska ku adkaysanaysa. Machadka cilmi baadhista nabadda ee caalamiga ah ee Stockholm ayaa ku qiyaasay in kala bar hubka ay Britain dhoofisay intii u dhaxaysay sabadihii 2013 iyo 2017 ay gaysay Sacuudi carabiya. Ayna ka faaiday balaayiin doolar, haddaba go’aan isku mid ah oo ay Midowga yurub ka qaataan arrintan ayaa ah mid aad u fog.
Faransiiska oo ku gacan sayray xayiraad dhanka hubka ah oo Sacuudiga lagusoo rogo added by admin on 27/10/2018